Semalt Inotsanangura Zvinhu Zvinokosha Zvekushandisa Webhusaiti
дешевые вай фай роутеры.5;text-align:justify;"> Chikwata chekutsvaga tsamba ibho rakanyatsodhindwa, iyo inokamba nzvimbo yako yezvose zviri mukatiuye inyore iyo muzvinjini kutsvaga kuonekwa. Mune zvimwe zviitiko, tinoisa zvinyorwa muhutaneti hwehutano hwedu nenzira iyo ava vanokanganisa vanokundikanakuwana. Chero ruzivo, rusingagoni kuwanika newebvambisi webhutori kazhinji harukanganwi neGoogle. Somugumisiro, hazvirevi kwaurikusanganisira zvipingamupinyi pasinei nekupedza maitiro ako SEO. Kuziva uku ndiko kukanganisa kwewebhu kubasa iyo vanhu vanoita pavanenge vachiedza kutarisa mawebsite avo.Semugumisiro, zvakakosha kumhanya vashandi pawebsite yako kuti vaite zvigadziridzo zvekare uye kugadzirisa zvikanganiso, izvo zvingaderedza kusarudzwa kwako.
Nyanzvi ye Semalt Digital Services, Jack Miller anotsanangura chinhu chinokosha pakushandisa zvikwata zvewebsite yako.
Kukosha kwekushandisa vashandi
Vanokwidza vanogona kukuratidza izvo vateereri vanoona. Sezvo vashandi vezvemabhizimisi vakawanda vanoita mawebsiteuye kuisa zvakagadzikana, vanofunga kuti vavanonyorera avo vanozviona vachinyatsozviona, vachikanganwa nezvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti zvisakwanise.Iyi ndiyo mamiriro apo vashandi vewebhu vanopinda. Vatambi vewebhu vanoenda kune dzimwe nzvimbo dzakavanzwa pane webhusaiti yako. Vanogona kuratidza kuti iwe haunachigadzirwa chemashoko pamwe chete nezvikanganiso zvakawanda zviripo mune zvaunofambisa maitiro ekugadzirisa.
1. Peji yekutevera inoitwa
Chimwe chezvinhu zvinokosha zve SEO chiri kutarisa kufambira mberi kwemapeji. Webhuvanocheka vanogona kuzvitsvaga ma analytics uye metrics kubva kune zvinyorwa zvinozivikanwa seGoogle Analytics neGoogle Search Console. Vanogonawo kubatsiraiwe unoteerera kushanda kwemapeji akasiyana, zvichikupa mazano anokosha ekugadzirisa ruzivo rwako kuitira SEO maitiro akanaka..
2. Fixing technical error
Chimwe chezvinhu zvinogona kuderedza SEO yako maitiro ndeyezvinhu zvine chokuita newebsite yakokukurumidza uye kupindura. Kumhanyira mhando yakadzika kunounza kero yakaoma yekupindura chero ipi zvayo URL muwebsite yako. Zvikanganiso nekudzokorora zvinogona kugadziriswanekukurumidza kushandisa mamwe emafrita avo sekukanganisa mafungiro 404. Vanogona kukupawo ruzivo pamusoro pezvekare zvekunyoresa hukama uye dzakasiyana-siyananzvimbo dzavari kutumira mashoko avo.
3. Vanokwata vanogona kuwana zvakasara zviripo
Vanogadzira vanogona kuona "hapana index" mirairo. Iyi ndiyo nzvimbo mumawebsite ako apo botshaigoni kusvika. Uchishandisa ruzivo urwu, unogona kugadzirisa zvigadziro muhutano hwehuwandu hwehutano uye kurongedza zvose zviri mukati mako.Zvigadzirwa zvemashizha nemapoka ane chekushaya mabhokisi mabhokisi anogona kugamuchira zvinyorwa pane d database yako.
4. Kucherechedza nekugadzirisa zvinyorwa zviripo
Mune mamwe maitiro, vadiki vanogona kuwana zvinyorwa zvinyorwa. Iyi dheta ndezvakagadzirwaiyo inowanikwa mune dzakawanda dzinoshandiswa pakutsvaga injini. Mashoko akadaro akaipa kune SEO yako uye inoguma nekuderedza simba rewebhu rakomapeji. Vanokwidza vanogona kukubatsira kuti uzive mapeji akadai uye kukubatsira pakugadzirisa kuburikidza ne301 zvakare.
Nhamba dzepaIndaneti dzinokwanisa kuona zvinhu zvakasiyana-siyana zvakavanzwa panzvimbo yako iyo inogona kuchinjanzvimbo yako yakananga. SEO inzira yakaoma, iyo isingangobatanidzi kutevera kwakakodzera uye kutevera ruzivo rwechikwadzi,asi kuenderera mberi nekuvandudza kwehupenyu hwako. Vamwe vatatu vevashandi vebasa webhutori vakaita seChirangaridzo Frog's SEO Spider kana Semalt Analyzer kuita sezvinofanirwa kutsvaga injini yekugadzira. Vanogona kukupa ruzivo rwakakosha, izvo zvingabatsira pakugadzirisa kudiwa kuneiwe webhusaiti yako yehutano kuitira kuti uwane nzvimbo yakakwirira mumibvunzo yehupenyu yekutsvaga yehupenyu.